I Anguilla dia mankalaza ny volana Jona ho toy ny Volana Spa & Wellness miaraka amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny Move Ya Body
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » I Anguilla dia mankalaza ny volana Jona ho toy ny Volana Spa & Wellness miaraka amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny Move Ya Body
Ny Anguilla Tourist Board (ATB) dia nanambara fa ny volana Jona manontolo dia hotendrena ho toy ny Volana Spa & Wellness, izay hanasana sy hamporisihana ny mponina sy ny mpitsidika Mandrosoa Ya Vatana!
Nandritra ny volana Jona, ny asan'ny Mandrosoa Ya Vatana Hetsika ny fampielezan-kevitra sy ny Birao fizahan-tany Anguilla, hiteraka fotoana hirosoan'ny tsirairay amin'ny safidiny fomba fiaina mavitrika sy salama. Amin'ity volana ity ny fampiroboroboana ny fialan-tsasatra, ny fahasalamana ary ny fahasalamana ao Anguilla dia hanasongadinana serivisy, fonosana ary hetsika izay anguillian tokana.
Wellness fizahantany, nofaritan'ny Global Wellness Institute ho "fitsangatsanganana mifandraika amin'ny fikolokoloana na fanatsarana ny fiainam-panahin'ny tena manokana", dia indostrialy miliara dolara ary mitombo hatrany amin'ny tsena mandroso sy mandroso.
"Ny fahasalamana dia iray amin'ireo fironana matanjaka indrindra amin'ny dia eran'izao tontolo izao, ary izy io dia mifanaraka tsara amin'i Anguilla," hoy ny sekretera parlemantera Cardigan Connor. "Ankoatry ny toeram-pialan-tsasatra tsara sy spa manja anay, manana mpanolotsaina fahasalamana manan-talenta - mpitsabo mpanotra, mpampianatra yoga, mpitaiza fahasalamana ary manam-pahaizana momba ny sakafo - izay mora azon'ny mpitsidika, na aiza na aiza toerana onenan'izy ireo."
Diabe hariva an'ny mpiasa amin'ny talata sy alakamisy no fototry ny programa momba ny fahasalamana any amin'ny toeram-piasana. Amin'ny Alakamisy 6 Jonafaha, ny Dia "miloko sambatra aho" mitranga, fitsangatsanganana eny amin'ny fiarahamonina mahafinaritra manomboka amin'ny West End, miaraka amin'ny fijanonana mozika sy kardio eny an-dàlana sy amin'ny faran'ny làlana. Ny mpandray anjara dia ampirisihina hanetsiketsika ny lokony mahafaly - vao mainka maharary ny tsara kokoa, ary miaraka amin'ny kojakoja - wig, ba kiraro, alokaloka, satroka.
An Island Hike ary Aerobika rano dia hetsika fanampiny amin'ny fampandrosoana, natao mba hampihetsiketsehana ny Anguillians sy ny mpitsidika ary hanomboka fahazaran-tena mahasalama kokoa izay hihoatra ny volana Jona.
B manokanakilasy yoga tsirairay avy ny sabotsy 22 jonand hisokatra ho an'ny rehetra hanatrika; ny sabotsy 29 jona manarakath, dinamika Hetsika Jam Fitness dia hatao eny amin'ny Lawn ATB. Ireo mpampianatra mpampianatra manao fanatanjahan-tena be mpitia an'i Anguilla no hitarika ny kilasy harahina mozika mivantana tantanan'ny mpanakanto malaza ao amin'ny nosy.
Ireo mpiaramiasa ao amin'ny Resort sy ny trano fisakafoanana dia handray anjara amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny alàlan'ny fanolorana safidy marobe amin'ny sakafo mahandro mahasalama sy mahasalama, miaraka amin'ny menus sy zava-pisotro manokana mandritra ny volana Jona. Isan-karazany Kitapo spa sy spaoro dia hatolotry ny trano fandraisam-bahiny mandray anjara koa, miaraka amin'ny mpampianatra, ny gym ary ireo mpankafy fahasalamana sy fahasalamana hafa eto amin'ny nosy, ary natolotr'ireo mpitsidika sy mponina.
Raha mila fanazavana fanampiny momba an'i Anguilla dia tsidiho azafady ny tranokala ofisialin'ny Anguilla Tourist Board: www.IvisitAnguilla.com; araho izahay amin'ny Facebook: Facebook.com/AnguillaOfficial; Instagram: @Anguilla_Tourism; Twitter: @Anguilla_Trsm, Hashtag: #MyAnguilla.
Natsipy tany amin'ny faritra avaratr'i Karaiba, Anguilla dia hatsarana saro-kenatra miaraka am-pitsikiana mafana. Ny halavan'ny vatohara sy vatosokay lava manify feno ravina maitso, feno morontsiraka 33 ny nosy, heverin'ny mpitsangatsangana mahay sy ny gazety mpizahatany ambony indrindra ho tsara indrindra eto an-tany.
Nasehon'ireo mpitsidika an'i Anguilla ny fitiavana tamin'ity ririnina ity
Ny "Exclusive Triple in Nightlife" dia mipaka any Ibiza